Dadka ka weyn 65 sano jir ayaa awood u leh inay booqdaan dhulkooda iyagoo haysta rukhsad | RayHaber | raillynews
HomeGUUDDadka ka weyn da'da 65 waxay awoodi doonaan inay aadaan waddankooda ogolaansho
xaaladda baroorta ee dadka ka weyn da'da
Wasiirka Koca, ayaa hadal qoraal ah ku sheegay kadib kulanka guddiga Sayniska, uu taabtay heerka socdaalka ee dadka ka weyn 65 sano.
“Muwaadiniinteenna ka weyn 65 sano waxay awoodi doonaan inay aadaan dalkooda 1 bil fasax ah.” Isaga oo adeegsanaya oraahda, Koca wuxuu yiri:
Odayaashayada da'da ah ee ka weyn 65 waxay muujiyeen dadaal weyn mudadaas. Muddadan, iyaga iyo dhallinteenna ayaa ah kuwa ugu dareenka badan. Waxaan heleynaa war yar oo ka wanaagsan 65 sano. Haddii duqowdayada da'da ah ee ka weyn 65 ay hubiyaan inay ku sii jeedaan meel go'an oo magaaladooda ah oo aysan haysan dhibaatooyin caafimaad, waxaa jiri doona sharci oggolaansho laga bilaabo berrito, ma soo laaban doono, maaddaama ay tahay safar hal-hal-hal ah oo ka imanaya maamulka degmada ee ay khusayso.
Haddii ay ka weynaato 65 sano oo lagu hagaajin karo halka ay ku bixi karto ogolaanshaha safarka, markaa ogolaansho ayaa la bixin doonaa. Hadeysan dhib ku imaan meesha ay dadkani aadi doonaan, waa loo ogolaan doonaa hadii aysan jirin xaalad soo laabasho. Gudoomiyaasheena degmo ayaa arintaas xukumaya waana ogolaan doonaan sidaas.
Markay tareenadu dhameeyaan, muwaadiniintu si sahlan ayey uga safri karaan Silivri ilaa Taksim
Tareenka BTK wuxuu furmayaa ... Tababar ka yimid London ayaa tagi kara Beijing
Safkar waxay bixisaa adeega shahaadada IRIS
Maanta Taariikh: 21 may 1941 Svilingrad Uzunkopru Railway